Mexico: Dhulgariir xoog leh oo in ka badan 200 ku dhinteen – Kasmo Newspaper
Mexico: Dhulgariir xoog leh oo in ka badan 200 ku dhinteen
Updated - September 20, 2017 10:35 am GMT
London (Kasmo), Dhulgariir qiyaastiisu tahay 7,1 darajo, cabbirka “Richter” ayaa shalay ku dhuftay dalka Mexico, isaga oo sababay burburka Caasimadda iyo hareereheeda kuna dilay in ka badan 200 oo qofood.
Tirada geerida ayaa laga yaabaa in ay gaarto ilaa 1,000, waxaa wali socota hawsha gurmadka lagu baadi goobgayo dad nool oo ku hoos jira burburka , waxaana koronto la’aan jooga dad lagu qiyaasay in ay ka badanyihiin 4 malyuun.
Xaaladda ugu ba’an waxay ka dhacday Dugsi Hoose oo ku soo dumay halka lagu magacaabo Coapa oo ku taalla koofurta bari ee Caasimadda oo la sheegay in ay ku dhinteen 26 ilmood, 30 kalena la la’yaha waxaa kale oo ku dhimatay ilaa 4 macallimiin ah, halka 8 qof oo kale la la’yahay wali.
Masiibada ayaa ku soo beegmaysa 2 maalmood oo qur ah ka dib sannadguuradii 32aad ee Dhulgariirkii 19kii Septembar 1985kii ku dilay dalkaas 98 qofood.
Madaxweyne Enrique Pena Nieto ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo qaran waxaana heegan la galiyay ciidammada dalka.
Dhambaallo taageero iyo tacsi isugu jira ayaa Mexico ka soo gaaraya caalamka daafihiisa, Donald Trump ayaa Twitter ugu sheegay in uu garab taaganyahay Mexico, halka Obama u diray tacsi gaar ah sida Madaxweynayaasha Latin America iyo Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay.